ILIFE A11, beddelka leh astaamo badan iyo qiimo wanaagsan [Dib u eegis] | Qalabka Wararka
ILIFE A11, beddelka leh astaamo badan iyo qiimo wanaagsan [Dib u eegis]
ILAHA wuxuu leeyahay qoys ka kooban qalabka nadiifiyaha ee robot-ka iyo noocyada kale ee aaladaha loogu talagalay inay naga caawiyaan hawlaha guriga, taas oo ay ugu wacan tahay wax soo saarkooda wanaagsan iyo waxqabadkooda, waxay noqdeen halbeeg warshadeed, tixraac wanaagsan marka aad raadinayso xiriirka ka dhexeeya tayada iyo qiimo.
Sidee bay u noqon kartaa mid kale, Sidee bay noqon kartaa haddii kale, waxaanu kuu keenaynaa falanqayn qotodheer oo ku saabsan ILIFE A11 cusub, nadiifiyaha vacuum ee robot oo leh sifooyin heer sare ah iyo qiimo dhexdhexaad ah. Na soo hel dhammaan sifooyinka ILIFE A11 iyo sababta loogu meeleeyay beddelka aadka u xiisaha badan ee suuqa.
1 Naqshadeynta iyo agabka: Markay sarreyso khidmadaha
3 Hababka nadiifinta iyo nidaamka 2-in-1
Naqshadeynta iyo agabka: Markay sarreyso khidmadaha
Sida naqshadeynta, ILIFE waxay go'aansatay inay sii wado ilaalinta qaababka naqshadeynta, kuwaas oo asal ahaan ah kuwa ay wadaagaan inta badan qalabka noocaan ah. Xaaladdan oo kale waxaan wajahaynaa qalab ka mid ah 350 x 350 x 94,5 milimitir ee miisaanka guud ee ka sarreeya 3,5 kiiloogaraam, gudaha heerarka warshadaha.
Qaybta hoose, waxaa jira laba taayir oo barkin leh, taayir jiho badan oo xagga hore ah iyo rullaluley silikoon ah iyo burush naylon ah si ay u bixiyaan nadiifin dhammaystiran dhammaan noocyada dusha sare. Qaybta danbe ee habka isku xidhka xaaqirka iyo hal buraashka wareega ee aagga bidix ee sare. In ka badan oo ku filan.
Ma xiisaynaysaa inaad iibsato ILIFE A11? hadda waad awoodaa halkan ka hel qiimaha ugu fiican
Xagga sare waxaan ku haynaa dareeraha LiDAR oo ku amraya aaladda, laba badhammo ON/OFF oo dib ugu noqda saldhigga dallaca iyo biyaano madoow oo ka farxin doona taageerayaasha boodhka iyo faraha. Ma jiro eccentricity ka baxsan nidaamkeeda gaarka ah ee dallacaadda.
Bari, Ka fog in biinanka ku yaal saldhigga aaladda, waxay ku taal xagga hore oo leh laba aag macdan oo fidsan kuwaaso ku beegmi doona kuwa isleeg ee saldhiga dallaca, ee ku xidhan tamarta korontada. Ma garanayo saameynta ay tani ku yeelan karto heerka khatarta korantada, si daacad ah, waxaan doorbidayaa biinanka caadiga ah ee ku yaal saldhigga qalabka.
ILIFE A11 waxa ay leedahay shahaado ROHS iyo sidoo kale awoodda nuugista ugu badan ee ilaa 4.000 Pa iyadoo ku xiran habka nadiifinta ee aan dooranay. Si tan loo sameeyo, waxay ku qalabaysan tahay baytari 5.200 mAh ah oo na siinaya nadiifinta qiyaastii 180 daqiiqo. oo leh habka nuugista ugu dhaqaalaha badan. Ma aannan awoodin inaan xaqiijino tan xad dhaafka ah sababtoo ah cabbirka guriga loo isticmaalo dib u eegista ayaa aad uga yar awoodaha nadiifinta ee ILIFE A11, taas oo ah, ma aanaan suurtagelin inaan ka saarno wax ka badan 50% baytarigiisa.
Waxaan leenahay nidaam khariidad dusha sare leh
Leh tignoolajiyada LiDAR 2.0 Kaas oo sameeya khariidad aad u xiisa badan oo degdeg ah, oo si aad ah u qaadanaysa 3.000 oo muunado ilbiriqsikii ugu badnaan 8 mitir. Algorithm-ka CV-Slam wuxuu muujiyay natiijooyin wanaagsan falanqaynta la sameeyay, naqshadaynta caqabadaha sida sariiraha, sariiraha iyo xitaa miisaska si fiican. Sida nadiifinta labaad, waxay si weyn u wanaajisaa waxqabadka waxayna dedejisaa nidaamka hab madax-bannaan, wax aad loogu qadariyo dabaqa, halkaasoo qalabka aan looga tagi karin qalabkiisa.
Hababka nadiifinta iyo nidaamka 2-in-1
Waxaan muujineynaa xaqiiqda ah in ILIFE ay hubiso in qaabka A11 aan ku leenahay nidaam xoqid iyo faaruq ah oo laba-in-mid ah. In kasta oo ay tani tahay xaqiiqo jirta oo ay tahay in aan caddayno, haddana waxa aynu haysanaa hal haan oo biyo iyo wasakh ah. 500ml ee burburka iyo kaliya (laakiin ku filan) 200 oo biyo ah. Xaaladdan oo kale, waxa cajiib ah in ay leedahay nidaam "xoqid" kaas oo u ekaysiiya jimicsiga gacanta isaga oo si yar u dhaqaaqaya, tani waxay ka dhigaysaa mid waxtar leh oo ka fogaanaysa ceeryaamo. Si kastaba ha ahaatee, sida aan inta badan sheego, xaaqinyadan waxaa loogu talagalay inay taabtaan sagxadaha parquet ama alwaax, waxayna si gaar ah ula socdaan dabaqyada dhoobada ah halkaasoo ay kaga tagaan calaamado badan oo biyo ah.
Haanta wasakhda ah: 500ml
Haanta isku dhafan: 300ml + 200ml
Waxay awood u leedahay in ay xaaqin oo ay faarujiso isku mar, waxaanu ku hagaajin doonaa taas iyada oo loo marayo codsigeeda gacanta. Tan dhexdeeda, bilaasha ah Android iyo iOS labadaba Waxaan isku dhejin karnaa ILIFE A11 oo xitaa waxaan ku xiri karnaa Alexa, Kaaliyaha farsamada ee Amazon si uu u adeeco tilmaamahayaga saxda ah ee ku saabsan hawlaha nadiifinta.
Dhanka kale, waxaan leenahay hab labanlaab ah oo loo isticmaalo gacanta, iyada oo loo marayo kontoroolka barnaamijka ee lagu daro qalabka, iyo sidoo kale nidaamka xakamaynta farsamada ee ku jira codsiga. Marka aan sawirno guriga oo dhan waxaan awoodi doonaa inaan:
Deji nidaamka nadiifinta aagga
Samee jadwalka nadiifinta
Samee nadiifinta cidhifyada ama "Spot Mode"
Waxaa ka mid ah hawlaha kale ee caadiga ah, sida suurtogalnimada in la hagaajiyo saddex awoodood oo nuugid.
Ma hayno, si kastaba ha ahaatee, xog sax ah oo ku saabsan decibelsyada ay tani u dhaxeyso ILIFE A11, si kastaba ha ahaatee, way ka fog tahay inay noqoto mid ka mid ah kuwa ugu xasilloon suuqa. Si kastaba ha ahaatee, waxay leedahay nidaamka nadiifinta "aamusnaanta" kaas oo yareeya awoodda, laakiin sababo muuqda awgood, waxay sidoo kale si weyn u yareysaa buuqa soo baxaya.
Este ILIFE A11 waxay ku kacaysaa 369 euro sida caadiga ah, in kasta oo ay jiraan dalabyo badan oo AliExpress ah, xitaa marka laga soo raro aaggaaga, taasi waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku raaxaysato qiimo la hagaajiyay. Tani waa hal sabab oo dheeraad ah oo maskaxda lagu hayo in ILIFE A11 ay tahay beddelka buuxa oo ay ka buuxaan sifooyin heersare ah oo qiimo ah oo ka badan inta dhexe. Waxaad horeba u ogeyd in awoodaha xoqidda sida caadiga ah ay aad uga fog yihiin kuwa ay bixiyaan hababka xoqidda gacanta, laakiin nuugista, 3D iskaanka iyo awoodeeda nuugista ayaa ka dhigaysa doorasho aad u xiiso badan.
Kaliya leh Alexa
Nidaamka dallacaadda yaab leh
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » ILIFE A11, beddelka leh astaamo badan iyo qiimo wanaagsan [Dib u eegis]
SPC Smart Ultimate, doorasho dhab ah oo dhaqaale badan
Sida looga saaro fayraska Mac-gaaga